'Alien 5' Tease dia hampiverina ny Ripley Weaver an'i Sigourney - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly 'Alien 5' Tease dia hamerina an'i Ripley an'i Wourners Sigourney
'Alien 5' Tease dia hamerina an'i Ripley an'i Wourners Sigourney
by Trey Hilburn III Jona 18, 2020
nosoratan'i Trey Hilburn III Jona 18, 2020
Mety tsy "lalao tapitra" ho an'ny vahiny franchise izao. Sigourney Weaver dia nanambara fa i Walter Hill sy David Giler dia samy nanoratra fitsaboana 50 pejy izay efa novakin'i Weaver.
Samy i Hill sy i Giler dia mpiara-miasa hatrizay vahiny franchise ary namolavola toko vaovao izay hiorina amin'ny Sigourney Weaver miverina amin'ny toetran'ny Lt. Ellen Ripley. Noho izany, manomboka mivavaka amin'ireo andriamanitra fa tian'i Weaver izay hitany fa miverina amin'ilay andraikitra.
"Sigourney, tahaka ny efa hatrany am-boalohany, dia maotina loatra amin'ny fahaizany voaporofo hamoaka ilay hevitra dia ny mitantara tantara iray mampatahotra ny pataloha amin'ny daty misy anao, mandaka ny boriky Xenomorph vaovao, ary mitarika fisaintsainana eo amin'ny tontolon'ny vahiny franchise sy ny fiafaran'ny toetran'ny Lt. Ellen Ripley ”hoy i Hill tamin'i Syfy Wire.
Brandywine Productions nizara ny sarin'ny fitsaboana ihany koa. Ny fonony dia manambara tagline vaovao izay mivaky hoe "Ao amin'ny habakabaka tsy misy olona afaka mandre anao manonofy". Seho miharihary sy vita tsara amin'ny tagline an'ilay sarimihetsika tany am-boalohany, “Ao amin'ny habakabaka tsy misy olona afaka mihaino anao mihiaka”.
Ny tagline vaovao miaraka amin'ireo teny nalaina roa nataon'i Edgar Allan Poe sy ny jeneraly William Tecumseh Sherman dia famantarana mazava izay mety hitranga.
Ny jeneraly Sherman dia malaza amin'ny fampielezan-keviny amin'ny ady any atsimo mandritra ny ady an-trano. Ny fomba fanaony dia ny handrava sy handoro izay rehetra tazomina any amin'ny faritry ny fahavalo. Mety ho fambara ve izany ka mety hanao zavatra mitovy amin'ny tranon'ny Xenomorph i Ripley? Raha izany dia tafiditra tanteraka aho.
Angamba ny fanonofinofy ao amin'ny fitanisana an'i Poe dia manondro ireo faritra sasany amin'ny franchise fa nofy. IE ny fahafatesany tao Alien 3 ary ny fomba fanaovana sariitatra an'ny Fitsanganana amin'ny maty vahiny. Ho an'ny rakitsoratra, tiako ny horonantsary rehetra.
Ahoana ny hevitrareo lahy? Manantena ny handray anjara amin'ilay tetikasa i Weaver manantena fanantenana? Ampahafantaro anay ireo hevitra.
Loharano: (SYFI WIRE)
vahinyAlien 5Lt. Ellen RipleyMpanenona SigourneyWalter Hill
Mety ho 'mpanaraka' ny lalao manaraka ny horohoro ve ny 'fanarahana'? [Clip miavaka]
Ny sarimihetsika tsara indrindra amin'ny shudder izay nalahatr'ireo manam-pahaizana